शृङ्गार जोगाउनै सकस : सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन (फोटोफिचर) | Ratopati
शृङ्गार जोगाउनै सकस : सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन (फोटोफिचर)
personकृष्ण खड्का exploreकाठमाडौं access_timeअसोज २४, २०७६ chat_bubble_outline1
काठमाडौँ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ शनिबार दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि नेपाल आउँदैछन् । २३ वर्षपछि हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा स्वागतका लागि राजधानीलाई अस्थायीरुपमा भए पनि झकिझकाउ बनाइएको छ ।
विभिन्न स्थानमा स्वागतद्वारदेखि फूलहरु रोपिएका छन् । त्यस्तै, फ्लेक्स र पोस्टरले राजधानीको कुरुपतालाई ढाक्ने प्रयास गरिएको छ । तर, यतिबेला सरकारलाई त्यही अस्थायी शृङ्गारलाई जोगाउन पनि हम्मेहम्मे परेको छ ।
सडक हिँड्ने बटुवादेखि राती रक्सीको मातमा हिँड्ने जड्याँहाले फूल मास्नेदेखि पोस्टर च्यात्नेसम्मका हर्कत गरेका छन् । प्रहरीले यसक्रममा दुई जनालाई पक्राउ पनि गरेको छ । अहिले शृङ्गारलाई जोगाउन ठाउँ–ठाउँमा प्रहरी नै परिचालन गरेको छ ।
राष्ट्रपति सी नेपाल आउने भएपछि राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
#सी जिनपिङ#Xi Jinping
Oct. 11, 2019, 5:55 p.m. Raman Chettri
नेपाल को पत्र पत्रिका र नेता हरु को कामै छैन / कहिले " M " त कहिले " C " आउने भनेर सारा काम छाडेर यिनै को पछि लाग्छन ! नकचराहरु अन्तरास्ट्रिय रुपमा देसको बेइज्जत गरिसके ! न त "M " ले केहि गर्छ न त " C " ले ! गर्ने नेपाली ले नै हो नेपाल को विकास ! काठमाडौँ मा अहिले सिंगार पटार गरेको देख्दा " हागाई कम पाद भारी " जस्तो लाग्यो यो कम्युनिष्ट सरकार को ! बिन्ति छ चिनिया हरुसंग केहि नमाग हामी नेपाली हरु भिकारी होयिनम !